ချမ်းလင်းနေ Chanlinnay: မြန်မာ စာရေးဆရာ၊ ဆရာမများ၏ စာပေဟောပြောပွဲများ အပိုင်း(၁)
၁။ ဆရာအော်ပီကျယ် - အသိပညာဖြင့်မောင်းနှင်သော
၂။ ဆရာမောင်သာချို(ခ)ဂျက်ကွမ်းခြံကုန်း - နှလုံးသားလှပါစေ
၃။ ဆရာနေဝင်းမြင့် - ကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်က
ဆရာမမေငြိမ်း - စာဖတ်ခြင်းအနုပညာ
ဆရာမခက်မာ - ဘဝထဲကစာများ
စာရေးသူ ချမ်းလင်းနေ အချိန် 7:14 PM
leomark February 23, 2011 at 1:21 AM
ကျေးဇူးပါ အကိုရေ။ ဆွဲနိုင်သလောက် ဆွဲသွားတယ်။
leomark February 23, 2011 at 1:42 AM
နိုင်သလောက် ထပ် ဆွဲ သွားတယ် အကိုရေ။
ဧရာဝတီချစ်သူ March 24, 2011 at 3:00 AM
အားလုံးကို စွဲသိမ်းပီး ဖြန်.ဝေပေးဘို.စိတ်ကူးထားတယ် လောလောဆယ် စက်ပျက်နေလို. ဘာမှမလုပ်ရသေးဘူး စဖော်ပြကထထဲက တွေးမိနေတာ...အကိုစိတ်ကူးတွေ အတော်ကောင်းတယ်ဗျာ ၀မ်းသာတယ် နောက်ထပ်လဲ လူမှုအကျိုးတွေ ဆောင်ရွက်လိမ့်မယ်လို. ယုံကြည်နေပါတယ်။
Grace March 27, 2011 at 12:11 AM
thanks for ur kind and efford brother!!!
Kyi Pyar April 18, 2011 at 10:55 PM
အမြဲပဲ စာပေဟောပြောပွဲတွေကို နားထောင်ဖြစ်ပါတယ်..
ဒီနေ့ဖွင့်တဲ့အခါ ဟစ်တိုင်အောက်က box တစ်ခုပျောက်နေတယ်..
Can you share the files which about the show taken place recently in singapore? Thanksalot!!
ကုသိုလ်ရတယ်ဆိုတာ ကုသိုလ်လုပ်တဲ့ သူတွေ ကုသိုလ်ရတာလို့
သဘောပေါက်လို့ ကိုချမ်းလင်းနေ လဲ ကောင်းတဲ့အလုပ်အတွက်
ကောင်းတာ ရ လိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ် ..
Unknown September 5, 2012 at 5:22 PM
အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။ စာပေဒါနဆိုတာ